Hiran State - News: HS:- R/wasaaraha iyo madaxweynaha oo Villada ninba
HS:- R/wasaaraha iyo madaxweynaha oo Villada ninba
HS:-Khilaaf salka ku haya qaraxii dhawaan la doonayey in lagu qaarajiyo r/wasaaraha iyo wasiiro u badnaa saaxiibadiis oo ay maleegeen madaxweyne Shariif iyo kooxda mayalka adag ee Allaa Shiikh ayaa ugu danbeyn waxey arintii caawa oo ay bisha April tahay 10/2012 mareysaa in ninba aagiisa xirto ciidamadiina la kala qaado.
Laakinse waxaa jira arin meel ka dhac ku ah wasiirka warfaafinta oo hada u muuqda ninka ay ku dhaceyso janjabaada ugu badan ee ka imaanaya xafiiska madaxweynaha, wasaarada arimaha gudaha, haya'ddaha amaanka, iyo maamulka gobolka Banaadir oo dhamaantood ay beesha caalamka ka sugayaan jawaab waadax ah qaabkii uu u dhacay qaraxii tiyaatarka oo ay quburo ka socota dowlado aan carabka lagu dhufan ay iskood u wataan baritaan.
Warar xaqiiqda u dhaw ayaa sheegaya in wasiirka wasaarada warfaafinta la doonayo in dhibaatadii dhacday oo dhan looga siibto iyadoona laga mabnuucay inuu ka hadlo radiyaha iyo TVga qaranka isaga iyo dhawr wasiiro oo kale.Xerta Allaa Shiikh oo 90% ay gacantooda ku jirto talada iyo maskaxda lagu maamulo xarunta Villada ayaa iyagu aaminsan amaba maalmaha soo socda qorsheynayo iney warbixin mugdi galineysa mustaqbalka wasiirka warfaafinta oo ah nin dhalinyaro ah u gudbiyaan beesha caalamka iyagoo ka dhaadhicinayo in wasiirka iyo afhayeenka Alqaacidada Soomaaliya Ali dheere ay wada dhasheen iyagoo ula jeeda iney isku qabiil yahiin xasuuqiina uu ninkaas sheegtay ninkanina shirka meesha ka dhacay abaabulay isagoon ku wargelin haya'ddaha amaanka, waa sidey sheegteene.
Arinta kale oo qtarteeda leh waa in la doonayo in laga hor dhaco hadiiba ay keenaan gudi uu dhawaan u xilsaaray baaritaanka arintaan oo wasiiro u badan r/wasaare Gaas oo laga yaabo iney wax badan fashiliyaan hadii waqti la siiyo.
Dabcan waxaan shaki ku jirin in wasiirka warfaafinta yahay dhibane maadaama uu ka mid ahaa dadkii la qaarajin rabay kana bad baaday masiibadii galaafatay madaxdii sportiga iyo dad shacab ah ee dhawaantan ka dhacday xarunta golaha murtida iyo madadaalada.
Sikastaba xerta Allaa Shiikh ayaa aaminsan in gursiga dhiiga badan ku taatay ee uu ku fadhiyo Shariifka ay uga dagi doonaan qoray caaradii inta ka horeysana ay intii karaankood ah kalaafan doonaan cidii siyaasadahooda guracan ka hor timaada.
Warar hada inaga soo gaaray dalka Kenyana waxey sheegayaan in gudoomiyahii hore ee baarlamaanka looga yeeray dalka Kenya si uu ugu hogaansamo doorashada ay iclaamiyeen baarlamanka Soomaaliya ee lagu wado iney dalka ka dhacdo bishani aynu ku jirno aaqirkeeda. arintaan loogu yeerayo Shariif Hasan ayaa timid xili ay beesha caalamka sugayeen in la meel mariyo qorshe howleedka iyo go,aanadii shirkii Garoowe taasi bedelkiina hogaanka sare ku dhaqaaqaan iney iyaga is qaarajiyaan xili malaayiin Soomaali ah oo dhiban sugayeen iney ka baxaan xiliga kumeel gaarka ah.
Iskuday fara badan oo aanu la sameynay wasiirka warfaafinta ayey inoo suuro galiweysay bal si aan u ogaano waxa uu ka ogyahay arintaan oo laga yaabo hadii sida ay wax u doonayaan xerta Allaa Shiikh wax u dhacaan mugdi iyo taariikh xumo u horseedeyso mustaqbalkiisa siyaasadeed maadaama uusan ka hadli karin idaacadaha gudaha ka howl gala. sikastaba wasiirka warfaafinta waa shaqsi ka caagan radiyaha iyo Tvga qaranka go'aankaan oo la sheegay inuu ka yimid xafiiska madaxweynaha uuna fulinayo agaasimaha wasaarada oo runtii la dhihi karo isagaaba wasaarada ka ah wasiir.
Hadaba la soco wararkeena danbe Allaa Shiikh VS r/wasaare Gaas iyo kooxdiisa
· admin on April 10 2012 17:46:10 · 0 Comments · 1800 Reads ·
14,666,702 unique visits